Alki point Sii wadka wadada—sahanka qorshaynta hore Survey
Alki point Sii wadka wadada—sahanka qorshaynta hore
Macluumaadka lagu bixiyay sahankan waxaa loo tixgeliyaa diiwaanka dadweynaha waxaana laga yaabaa in lagu soo bandhigo dadweynaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, fiiri Xeerka Diiwaanka Dadweynaha, RCW Cutubka 42.56. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sida aan u maamulno macluumaadkaaga, fiiri Qoraalkayaga Qarsoodiga.
Bishii Maajo 2020, waxaan Alki point ka hirgelinay “Joogitaanka Wadada Joogta” halkaas oo wadadu u xiran tahay in laga gudbo taraafikada* waxaana loo furay dadka soconaya iyo baaskiilada. Eeg khariidada hoose. Waxaan bulshada ka raadineynaa jawaab celin ku saabsan waxa si fiican u socda Iyo waxa aan ahayn sidaasi iyo noocyada hagaajinta joogtada ah ee ay tahay inaan ku sameyno wadada Alki Point
Joogtaynta Dhaqdhaqaaqa Jidadka waxaa la furay iyadoo lala kaashanayo Jardiinooyinka iyo Madadaalada Seattle oo qayb ka ah jawaabta COVID-19 ee Magaalada Seattle. Waxay ku yaalliin meelaha u dhow meelaha caanka ah, sida Constellation Park oo ku yaal Alki Point, waxayna qayb ka ahaayeen jawaabta Magaalada si ay u taageeraan fogeynta bulshada. Wadada Alki Joogtaynta Dhaqdhaqaaqa Jidadka way ka duwan tahay Jidadka Caafimaad ku sugnow, oo lagu rakibay Jidka Dariiqa (Neighborhood Greenways) ee hadda jira,
kooxda mashruucu waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u heli lahayd maalgelin mashruuc joogto ah oo ka socda Alki Point.
*Gawaarida Xaafaada degan oo kaliya ayee u furantahay
Alki point Joogitaanka Wadada Joogta-- Khariidada Mashruuca ee Hadda